လက်တင်အမေရိကနှင့်စပိန် - Cryptocurrencies ရှိသော Blockchain စီမံကိန်းများ Linux မှ
မကြာသေးမီကထုတ်ဝေလေ့လာမှုခေါင်းစဉ်အရသိရသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Cryptocurrency Benchmarking လေ့လာမှု က ဦး ဆောင်သည် ဒေါက်တာ Garrick Hileman နှင့် Michael Rauchsကင်းဘရစ်အခြားရွေးချယ်စရာဘဏ္Financeာရေးစင်တာ (CCAF) မှသုတေသီများ၊ Bitcoin သည်ကုန်သည်များ၊ တစ် ဦး ချင်း၊ သတ္တုတွင်းသမား၊ ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်လဲလှယ်သည့်အိမ်များနှစ် ဦး စလုံး၏လက်ခံယုံကြည်မှုအရှိဆုံး cryptocurrency ဖြစ်သည်; သို့သော် altcoins များသည်အသုံးပြုမှု၊ စျေးနှုန်းနှင့်လက်ခံမှုကိုအဆတိုးမြှင့်မှုကိုပြသသည့်ခိုင်မာသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးကူးသန်းရောင်းဝယ်နိုင်သော cryptocurrencies ၁၆၀၀ ကျော်ကိုလက်ရှိတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်တွက်ချက်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလဲလှယ်အိမ်များနှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်များတွင်ဖြစ်ခြင်း စပိန်နှင့်လက်တင်အမေရိက2crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် cryptocurrencies ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလားအလာကြီးထွားလာစျေးကွက်။ ဤထုတ်ဝေမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စတွင်လက်ရှိအခြေအနေကိုမျှတစွာအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်စပိန်နှင့်လက်တင်အမေရိကရှိအသိအမှတ်ပြုဆုံးသော cryptocurrencies ကိုလေ့လာပါမည်။
2 Cryptocurrencies စာရင်း
ဤ FinTech ခေတ်သစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Bitcoin ဖန်တီးမှုဖြင့် Blockchain Technology (Blockchain) မွေးဖွားခြင်းနှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက၊ နိုင်ငံသားနှင့်စီးပွားဖြစ်အစပျိုးမှုများစွာပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အဆတိုးတက်ခြင်းတို့ကိုယနေ့တိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တိုကင်များ၊ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် cryptocurrencies အသုံးပြုခြင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စပိန်နှင့်လက်တင်အမေရိကဒေသများသည်သူတို့အတွက်စံနမူနာကောင်းဖြစ်သည်။
ဤအရာအလုံးစုံ cryptocurrencies ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးထိုကဲ့သို့သောလက်တင်အမေရိကကဲ့သို့သောဒေသများတွင်ဤနိုင်ငံသည်အစိုးရ၊ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်လုပ်ငန်းများမှထိန်းချုပ်ထားသော၊ ကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမခံရသည့်ကြွယ်ဝမှုပုံစံအသစ်ကိုခွင့်ပြုထားသည်။
အကယ်စင်စစ်ထိုသူအချို့တို့သည်မကြာသေးမီအချိန်က၊ အစိုးရများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီမှဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီးအချို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ (သို့) အမျိုးသားအင်စတီကျူးရှင်းများ၏သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊နှင့်အချို့သောသူများသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပရိသတ်အတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်ဖန်တီးထားသည်
အဆိုပါအကျဉ်း အောက်တွင်တင်ပြခဲ့ပြီးအသိမှတ်ပြုဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး cryptocurrencies ၏အကျဉ်းချုပ်, အက္ခရာစဉ်အတိုင်းနှင့်မူရင်းနိုင်ငံအားဖြင့်အုပ်စုဖွဲ့လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်အချို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - ပြည်သူပိုင်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ လူထုနှင့်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းများ၏လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ပြည်သူလူထု၏အစပျိုးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာနည်းပညာအသစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်း။
Y cryptocurrencies panacea သို့မဟုတ်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများ၏စီးပွားရေးကိုဖြေရှင်းဖို့အဓိပ္ပါယ်ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ကြပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောနိုင်ငံများမှသူတို့၏လွတ်လပ်စွာမွေးစားခြင်းအတွက်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကန့်သတ်ချက်များသို့မဟုတ်အဟန့်အတားများကိုဆက်လက်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားများစွာသောလူများ၏ဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်ရန်နှင့်ဒေသတွင်းရှိနိုင်ငံတစ်ခုစီ၏အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောစီးပွားရေးအခြေအနေများကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရန်အတွက်အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်သွားမည်။
များစွာသောစီမံကိန်းများသည်စပိန်နှင့်လက်တင်အမေရိကတွင်ဆောင်ရွက်နေသောစီမံကိန်းများဖြစ်ပြီးများစွာသောစီမံကိန်းများမှာပါ ၀ င်သည်နှင့်နည်းပညာသို့မဟုတ်အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကဲ့သို့သောနယ်ပယ်များတွင်သာမကခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပညာရေးနှင့်အစိုးရစီမံခန့်ခွဲမှုတို့လည်းပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာ -
Bitcoin နှင့် Litecoin မှတီထွင်ခဲ့သော်လည်းစပိန်လယ်ယာနှင့်အတူတကွသတ္ထုတူးဖော်ခြင်းကိုအဓိကထားခဲ့သည်။ သူမအကြောင်းကိုပိုမိုကြည့်ရှုပါ Coinmarketcap.
အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သော cryptoasset သည်စပိန်နိုင်ငံမှထုတ်ယူသောအစားအစာကွင်းဆက် Nostrum ကိုမြှင့်တင်ရန်အထူးပြုလုပ်ထားသော Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
'Consensus of proof' algorithm နှင့် Jaspberry ဟုခေါ်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သတ္တုတွင်းရှေ့ပြေးပုံစံအားဖြင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးကိုဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရန်ကတိပေးသော cryptocurrency ။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
Cryptocurrency (Token ERC-20) သည် cryptocurrency စျေးကွက်အားလူတိုင်းလက်လှမ်းမီစေရန်ရည်ရွယ်သောဗဟိုထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်တွင်ကုန်သွယ်ရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
Crychocurrency သည် blockchain နည်းပညာကို အခြေခံ၍ Ethereum ERC-20 platform ပေါ်တွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံအိတ်ရှိသည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
အမြန်၊ လုံခြုံ။ ထိရောက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်သော cryptocurrency ။ တိုင်းပြည်တွင် FinTech Technologies နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနမြှင့်တင်ရန်အပြင် Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
Cryptocurrency Litecoin ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကို အခြေခံ၍ အနာဂတ်တိုးတက်မှုများကိုလမ်းညွှန်ရန် "crypto asset model" ၏အခန်းကဏ္fulfillကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏စွမ်းအားအတွက်အခြေခံဖြစ်လိုသော Cryptocurrency သည်အခမဲ့အသုံးပြုရန်အတွက်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော application များမှတဆင့်အချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်သောအမည်မသိအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ blockchain မှတဆင့်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးချီလီ Ethereum တိုကင်သည်တိုကင်များအသုံးပြုခြင်းအသိပညာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် cryptocurrencies ၏ဗဟုသုတပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းအားဖြင့် blockchain နည်းပညာကိုအများပြည်သူနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
Cryptocurrency ကို ၁၀၀% လက်တင်အမေရိက cryptocurrency နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေသားအဖြစ်ချက်ချင်းအသုံးပြုရန်အတွက်ကျယ်ပြန့်သောလက်ခံနိုင်သောနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိသည့်ကွန်ယက်ဖြင့်မွေးဖွားလာခဲ့သူတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
လုံခြုံစိတ်ချရသောသေတ္တာကုမ္မဏီများ၏လုံခြုံရေးတွင်းများတွင်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
Crystocurrency သည် Trisquel Premium တွင် Crypto Ecosystem အတွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်ဖန်တီးထားသော Cryptoeconomics သည် Cryptoeconomics အားနိုင်ငံတကာအဆင့်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ ရေရှည်တည်တံ့ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်လူအများအား၎င်းတို့၏အမှန်တကယ်အလားအလာကိုပြသရန်ပညာပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ cryptocurrencies ၏။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
၎င်းသည်လူထုမှအုပ်ချုပ်သောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့် cryptocurrency ဖြစ်ပြီးသဘောတူညီမှုနှင့်စွန့် ဦး တီထွင်သူများ၏ကော်မတီများကကျောထောက်နောက်ခံပြုသည်။ သူသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောအသိုင်းအဝိုင်းတွင်စီးပွားရေးမက်လုံးများကို align လုပ်ခြင်းဖြင့်စေတနာအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲရန်မျှော်လင့်သည် Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
CryTocurrency ကိုပူးတွဲ FinTech ဌာနမှတီထွင်ခဲ့သည် ကျူးဘား Ventures၎င်းသည်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးကာရစ်ဘီယမ်ငွေကြေးငွေကြေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrency သို့ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်Revolupay®နှင့် CubaFIN ချေးငွေပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
အသုံးပြုသူများနှင့် developer များအနေဖြင့်ဤအစွမ်းထက်သောနည်းပညာကိုလူမှုမီဒီယာ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဘလော့များနှင့် e-commerce ဆိုဒ်များအတွက်အသုံးချခွင့်ပြုသည့် Cryptocurrency ။ ထို့အပြင်ဒေါ်လာစျေးမကျသည့်နိုင်ငံများရှိငွေကြေးများစီးဆင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်ဖန်တီးထားသည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
habanero ငရုတ်ကောင်း၏ဟက်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်အမျိုးသားရေးလယ်ပြင်အားကောင်းလာစေရန်ရည်ရွယ်သည် Cryptocurrency ။ ၎င်းသည် Amar Hidroponía၏ cryptoactive (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်) သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားချီလီ Habanero ရှိထုတ်လုပ်မှုယူနစ်မှရရှိသောအမြတ်အစွန်းများတွင်ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ.
အိမ်ခြံမြေနှင့်မက္ကဆီကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသော Cryptocurrency သည်၎င်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိကုန်သွယ်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ တိုင်တန်းကဏ္ sectors (၇) ခုရှိသည် (Real Estate, Technology, Commerce, Tourism, Art, Startups and Health) ။ TRADcoin ကိုအထောက်အပံ့ပေးသော၊ အမှန်တကယ်၊ မြင်သာထင်သာရှိနိုင်သောနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစီမံကိန်းအားလုံး၏အထက်တွင်အဆိုပြုထားသည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ.
ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ထိရောက်ပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ရန်မျှော်လင့်သည့် Cryptocurrency သည်တန်ဖိုးရှိသိုလှောင်ခြင်းအဆင့်မှ "Transactional Use" ၏အဆင့်သို့အသိအမှတ်ပြုလဲလှယ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာသည်။ နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများကလက်ခံခဲ့သည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ.
စျေးကွက်ဒြပ်စင်အဖြစ်အသုံးပြုရန်၊ ဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ ချွေတာခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်အခြား cryptocurrencies နှင့်လဲလှယ်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်လွယ်ကူသောအဆုံးမှအဆုံးအသုံးပြုရန်ရှာဖွေသည့် Cryptocurrency ။ တီထွင်ဖန်တီးသူများက၎င်းသည်ဗင်နီဇွဲလားနှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမည့်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံသားများ၏တိုက်ရိုက်ပါ ၀ င်မှုအတွက် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးပွင့်လင်းမြင်သာသောဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အင်ဂျင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများ။ Coinmarketcap ပေါ်မှာပါ.
Cryptocurrency သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Bitcoin ယဉ်ကျေးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အမည်ဝှက်ခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်းအမြန်နှုန်းနှင့်ဘဏ္freedomာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူ၏ရည်မှန်းချက်မှာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောယုံကြည်ရသောအမျိုးသား cryptocurrency ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ Bolivarcoin ၏အတွေးအခေါ်သည်အခြား altcoins များချမှတ်သောစံနမူနာများကိုလိုက်နာရန်နှင့်၎င်းတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အသုံးပြုမှုများကိုအစီရင်ခံရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင်သည် အခြားရွေးချယ်စရာသတင်းအချက်အလက်က်ဘ်ဆိုက် y Coinmarketcap ၌တည်ရှိ၏.
တည်ငြိမ်သောငွေလဲနှုန်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောအာမခံထားသောလူသားစွမ်းရည်ကိုဆုချရန်ကြိုးပမ်းသော Cryptocurrency ။ ရှာပါ လက်ရှိနည်းပညာများကို အခြေခံ၍ ဆန်းသစ်သောကိရိယာများကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီးပွားရေးကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း။ E-commerce, POS သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်သင်၏ပလက်ဖောင်း၏ Crypto ဂေဟစနစ်တွင်ထည့်သွင်းမည့်အခြားအရာများ၊ အဆက်မပြတ်ကြီးထွားနေသော Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ.
Cryptocurrency သည်လုံးဝဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည် privacy ကိုအာရုံစိုက်ပြီးချက်ချင်းငွေပေးငွေယူကိုကတိပေးသည်။ Onixcoin စီမံကိန်း၏ Crypto ဂေဟစနစ်သည်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏အဓိကကျသည့်နေရာနှင့်နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်ရန်ချေးငွေပလက်ဖောင်းနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းမှုနှင့်အများဆုံးအသုံးဝင်မှုတို့အတွက်ပြည့်စုံသော REST API ကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားရန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးချဲ့မှု၌တည်ရှိသည်။ 2018 နှင့် 2019. ကာလအတွင်းများစွာသောအခြားစီးပွားရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းများအကြား blockchain, ဒါဟာတစ် ဦး ရှိပါတယ် အခြားရွေးချယ်စရာသတင်းအချက်အလက်က်ဘ်ဆိုက် y Coinmarketcap ၌တည်ရှိ၏.
Cryptocurrency သည်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြားခံများမပါဘဲလုံခြုံစိတ်ချရသော၊ ပိုက်ဆံအိတ်မှငွေလွှဲခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ အမျိုးသားစီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်အတွက်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံ၏လှပပြီးလှပသောသဘာဝနေရာများသို့သွားရောက်ခြင်းမှအကောင်းဆုံးဟိုတယ်များကိုခံစားရန်အသုံးချနိုင်သည့်ကြီးမားသည့်အလားအလာရှိသောနိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းဈေးကွက်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ.
အခြားသူများအားအခွင့်အလမ်းများပေးရန်ကြိုးစားနေသည့်ဗင်နီဇွဲလားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောတန်ဖိုးရှိသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရှိသည့်ဘဏ္financialာရေးခေတ်သစ်၊ ငွေကြေးနှင့် cryptocurrencies ကိုအထူးပြုသည့်ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းရှိပြီး WolfClover ကုမ္ပဏီမှကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသော Cryptocurrency လူများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုများစွာရှိသောသစ္စာ ရှိ၍ ပုံမှန်အသင်း ၀ င်အခြေပြုအဖွဲ့၏အကျိုးစီးပွားကိုဖမ်းယူရန်မျှော်လင့်သောမိသားစုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Coinmarketcap မပေါ်သေးပါ။
လက်တင်အမေရိကတွင်အခြားသောအတွေ့အကြုံများလည်းရှိသည် အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (သို့) ဒေသတွင်းရှိအခြားနိုင်ငံများတွင်လက်ရှိ Cryptocurrency ကဲ့သို့ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည် ဗင်နီဇွဲလားမှ Petroသို့မဟုတ်အနာဂတ် Cryptocurrencies ဂွာတီမာလာမှ Vara၊ Puerto Rico မှ Kokicoin သို့မဟုတ်ဥရုဂွေးမှ E-Peso၎င်းသည်အချိန်မီရင့်ကျက်မှုရှိလိမ့်မည်။ သင်၏အလယ်အလတ်ကာလအတွင်းသင်၏တိုင်းပြည်နှင့်ဒေသတွင်း၌ကောင်းသောအောင်မြင်မှုရရှိလိမ့်မည်။
Cryptocurrencies အကျော်ကြားဆုံးနှင့်လူသိများသော Blockchain Technology နှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန် / အကျိုးကျေးဇူးများသည်လက်တင်အမေရိကဒေသ၌သာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အဆင့်တိုင်းတွင်ပျံ့နှံ့သွားမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိက၊ လူမှုရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှစ်ရပ်စလုံးသည်၎င်းတို့အသုံးပြုသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများထံမှသာယာဝပြောမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအကြီးမားဆုံးသောပမာဏအဖြစ်ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
နှင့် cryptocurrencies ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်တက္ကသိုလ်ဘဏ္financialာရေး, နည်းပညာနှင့်ပညာရေးစနစ်၏အလုပ်သို့မဟုတ်အခန်းကဏ္ is မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဤအတွက်၊ တွေ့ဆုံပွဲများ၊ ဖိုရမ်များ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများသို့မဟုတ်သုတေသနစီမံကိန်းများစသည့်လှုပ်ရှားမှုများသည်လွန်ခဲ့သည့်ရာစုနှစ်အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌ဆက်လက်တည်ရှိနေသည့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသည့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးစနစ်၏မျက်နှာသာကိုလျော့နည်းသွားစေရန်သေချာစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဘဏ္Financialာရေးနည်းပညာများ၊ Blockchain နှင့် Cryptocurrencies အကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်သင်ပိုမိုဖတ်ရှုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။, ဒီပြည်တွင်းရေး link ကိုမှစတင်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ Operating Systems) နှင့်ဤပြင်ပ (Blockchain နှင့် Cryptocurrencies အကြောင်းဝေါဟာရ - FinTech World).
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » လက်တင်အမေရိကနှင့်စပိန် - Cryptocurrencies ရှိသော Blockchain စီမံကိန်းများ
Debian 8.11 တွင်သတင်းများအားလုံးကိုစုဆောင်းရန် SteamOS ကိုအဆင့်မြှင့်ထားသည်
ReactOS 0.4.9 ကို features အသစ်များနှင့်တိုးတက်မှုများစွာဖြင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်